पत्रकार बलराम बानियाँ मृत्यु प्रकरण: यस्ताे छ छायांँचन्द्रकाे ६ घण्टे बयान ! - Nagarik Medi
पत्रकार बलराम बानियाँ मृत्यु प्रकरण: यस्ताे छ छायांँचन्द्रकाे ६ घण्टे बयान !
स्वर्गीय पत्रकार बलराम बानियाँ । साभार: सामाजिक सञ्जला ।
२०७७ भाद्र ११, बिहिबार मा प्रकाशित ३ महिना अघि
दुई साताभन्दा पुरानो घटना हो यो । तर, उनको मृत्युको घटनालाई प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अन्वेषण र विश्लेषण गरिरहेको छ । यसक्रममा बानियाँनिकट पत्रकार छायाँचन्द्र भण्डारी र उनको परिवारको बयान लिएको छ ।
साभार: जनआस्था अनलाइन